पैसा एउटालाई दुःख जनतालाई,सडकमै बालुवाको डम्पिङ्ग – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर पैसा एउटालाई दुःख जनतालाई,सडकमै बालुवाको डम्पिङ्ग
पैसा एउटालाई दुःख जनतालाई,सडकमै बालुवाको डम्पिङ्ग
कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका वडा नं. ७ र ८ मा पर्ने बाटोमा स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन । शिवराज नगरपालिकाको रुद्रपुर हुँदै विजयनगर गाउँपालिका जोड्ने बाटोमा नगरपालिकाको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन् ।
शिवराज नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिका जोड्ने बाटो मर्मत गर्ने भनी नगरपालिकाले बाटोमा मिस्कट झारेको पनि महिना बित्न लाग्दासम्म बाटोको मर्मत हुन सकेको छैन । बाटोमा अव्यवस्थित रूपमा मिस्कट थुपारिएको छ । झारिएको मिस्कटलाई सम्याइएको छैन जसले गर्दा आवतजावत गर्ने ठूला सवारी, मोटरसाइकल सवार यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ । बाटोमा झारिएको मिस्कट र अस्तव्यस्त रूपमा फैलाइएको मिस्टकले बाटो भरी सानाठूला पहाड बनेका छन् जसले गर्दा साइकल यात्रीलाई त साइकल डोराएर हिंड्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । साइकल डोराएर हिंडिरहेका स्थानीय रामकुमार पासी भन्छन्, “बरु पुरानौ बाटो नै ठिक थियो, बनाउन नसक्नेले नबिगारेको भए हुन्थ्यो, पहिला साइकल चढेर हिंड्न त सकिन्थ्यो अहिले डोराउनु पर्छ ।’, पासीले अगाडिको बाटो देखाउँदै भने– ‘बाटोमा नै बालुवा थुपारिएको छ पानी प¥यो भने त बाटो नै बन्द हुन्छ ।”
अझ अगाडि सोही बाटोमा नै पर्ने रौनक क्रेशर उद्योगले बाटोमा नै बालुवा डम्पिगं गरिदिएको छ । बाटोमा नै बालुवा डम्पिंग भएपछि करिब ५० मिटर बाटो अनुमानका भरमा हिंड्नु पर्ने स्थानीयले बताएका छन् । उद्योगको नाममा आवतजावत गर्नेहरूलाई समस्या पर्ने गरी गरिएको डम्पिङ्गको विषयमा समेत नगरपालिकाले आँखा चिम्लिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । रौनक क्रेशर उद्योगले डम्पिगं गरेको बालुवाका कारण आवतजावत गर्नेले पाएको सास्तीको विषयमा नगरपालिकामा र वडा अध्यक्ष समक्ष कुरा राख्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको हरिशंकर अहिरले बताए । बाटोमा बालुवा डम्पिङ्गले गर्दा बाटो पुरै धुलाम्मे र चिप्लो भएको छ ।
“यसरी अव्यवस्थित रूपमा बाटोमा नै क्रेशर उद्योगले डम्पिंग गर्दा पनि नगरपालिका किन मौन ? बाटोमा असर नपर्ने गरी उद्योग व्यवसाय संचालन हुन पर्ने तर बाटो नै मिचेर उद्योग संचालन गर्दै आएको रौनक क्रेशर उद्योगलाई नगरपालिकाले किन छुट दिएको छ ?” स्थानीय राजेश चौधरीले आक्रोशित हँुदै भने ।
दुई स्थानीय तहलाई जोड्ने बाटोको नै यस्तो हरीविजोग भए पछि नगरपालिकाले विकासको काम कसरी गरेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न स्थानीयबासीको मनमा जागेको छ । निर्वाचन ताका गरिएका नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण सडक पिच गर्ने वाचा अहिले बाटोमा बालुवा भएको छ । नगरपालिका भने यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको बताएको छ । नगरपालिकामा यसबारे कुनै जानकारी नभएको शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेले बताए । पौडेलले भने– “अहिलेसम्म हामीलाई थाहा थिएन अब अनुगमन गर्छौं गलत भए कारबाहीको दायरमा ल्याउँछौँ ।”
नगरपालिकाले दुई स्थानीय तह जोड्ने वाड नं. ७ र ८ भित्रको १७०० मिटर बाटो यस वर्ष मर्मतको लागि शिवम् कन्ट्रक्सन तौलिहवालाई ठेक्का दिएको छ । कन्ट्रक्सनले मर्मतका लागि बाटोमा मिस्कट झारेको हप्तौँ बित्दासम्म बाटो मर्मत भएको छैन । मिस्कटलाई सम्याउने ग्रेडर मेशिन नआएको भएर काम ढिलो भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
दाङ जिल्ला अदालतमा पहिलो पटक गोला प्रथाबाट मुद्दा सुनुवाइ